Sonke ngala shooting kuba iinkwenkwezi, ingakumbi xa oko iza uthando kwaye ukufumana umntu othile. Sihamba ngokusebenzisa dozens ka-iiforam ukufunda indlela kuziphatha, abanye kuthi gcina ukuzama nkqu xa ithemba ngu defusing na balloon. Abanye kuthi, nangona kunjalo, khangela dating hayi njengoko elide ukuzibophelela kunye amabini imiqobo kunye nemingeni. Baya nje bonwabele intlanganiso entsha abantu kwaye musa overthink malunga budlelwane imiba nantoni na. Kodwa sonke yiya kwi-intanethi amaxesha ngamaxesha ukwenzela ukuba ezikhethekileyo kanye nge beautiful stranger.
Sigcina kwi progressing xa oko iza dating. Budlelwane nabanye asingawo a real-ixesha umxholo kuphela. Ngaphandle koko, i-intanethi intlanganiso rhoqo ukuchongeka mna-ukukholosa yayo s lula ukufumana incoko pruhun. Akuvumelekanga njengoko ixesha-consuming. Uyakwazi literally incoko kwi-hamba. Ngexesha real-ubomi uthetha ifuna ezininzi ixesha nomzamo, i-intanethi iincoko ingaba lula kakhulu. Nje zibalisa yakho viz-a-viz ukuba ungummi abancinane uxakekile, okanye impendulo nanini na xa kufuneka kwakhona kuba abanye kubasindisa ixesha ukufumana ukwazi ngamnye enye. Kubalulekile indlela lula. Ukuba akunjalo, i-bravest uhlobo umntu, ube nokuzisa abanye awkwardness ukuba incoko. Kuba abo bantu, kwi-intanethi-chatting ikhangeleka kuba egqibeleleyo bulgarian. Uyakwazi google abanye ebukekayo chola-phezulu imigca, thumela i jokes kwesi sihloko yakho mutual inzala, okanye cinga nje ngokukhawuleza. Ngamanye amaxesha nje glance ukusuka a real umntu unako kuba umngeni. Uyakwazi kubonakala ezincomekayo kwi-intanethi. Kuhlangana abantu abatsha, i-intanethi kunye qala faking okanye ukuhlala a true umntu kubalulekile phezulu kuwe. Kodwa into ingaba obvious, ukuba sonke kufuneka abanye extra-inkxaso kwezinye subjects ngexesha iincoko. Umzekelo, ukuba kubekho inkqubela wabuza ufuna a bummer umbuzo malunga xesha Umdlalo we Kweetrone, kwaye olahliweyo ukubukela i-it kwesinye, nibe okanye akavumelekanga ukuba zincede ngokwakho ngaphandle. Bhetele na kuxwilelwa kuba abo lies, mfana. Admit ke, sonke ufuna zibe ngaphezulu likeable kwaye cleverer emehlweni oyintanda umntu. I-intanethi intlanganiso hayi njengoko committing. Ukuba uyabona ukuba budlelwane nabanye ngabo ngokwenene na ukusebenza ngaphandle ngokunjalo nani wayecinga ukuba baye kwenza, uyakwazi nje yokuphepha i-elimfiliba kwaye block umntu okanye politely zibalisa ukuba incoko iphezu. Kwakhona, ayithethi t kufuna kangangoko bravery kwaye uza bazive okhawulezayo uncedo endaweni remembering abo ezibuhlungu amehlo ngonaphakade. Qaphela: musa t substitute breakups, ukhethe ukuya kuxelela yonke into kwi-intanethi ukuba ve ukuba intlanganiso kwi-yokwenene ebomini, ngenxa yokuba kubaluleke kakhulu elilungileyo eliphantsi kwaye rude ukuba end budlelwane nabanye, ngolohlobo.
Ezininzi abantu yokwenene ebomini ayoyika okanye ngokulula ayikwazi get acquainted kunye opposite sex ngenxa yabo modesty. Ngoko ke, baya kufika aid ka-Internet, apho unako relax kwaye hayi kungena kuphila unxibelelwano kude kube kukho imiceli-mutual inzala ukususela ngokwembalelwano. Lwezentlalo networks ukuxhobisa abantu. Apha namnye unako zithungelana kunye eziliqela abantu kanye kwaye khetha yakhe okanye yakhe closest umoya twin. Kuhlangana abantu, i-intanethi kunye yakho mna-athathe iza kukhuthaza. Nowadays abantu abaninzi ingaba keen kwi zisasaza iifoto zabo egameni loluntu networks. Wonke umntu ulindele kuba cherished likes kwaye phantsi izimvo zabo inkangeleko iifoto. Layo s ngoko ke, ozolisayo ukufumana compliment ukusuka abahlobo bakho nje okanye esingabaqhelanga. Oku ngenene ukuchongeka wethu mna-athathe. Kwi-Intanethi blurs imida phakathi kwethu. Ukuba oko kwenzeka kuwe ukuhlangabezana abantu abatsha kwi-intanethi, mhlawumbi uyazi ukuba ndinovelwano ka-togetherness nkqu ukuba kukho anamashumi amabini miles phakathi kwenu. Ngoku sino-intanethi-iincoko, Facetime, Facebook, Instagram, i-Skype kwaye ilanlekile kwezinye helpers kwi-zokwandisa inkqubo imbono yokufumana kukufutshane ukuba uqiniseko umntu. Nokungabikho kuphila unxibelelwano. Nayiphi na onesiphumo unxibelelwano, akukho mcimbi indlela emangalisayo kunjalo, ayinakuze buyisela a kuphila incoko, apho amazwi ingaba yalandelwa emotions, gestures kwaye facial yenza ingxenye yesakhelo. Sisebenzisa ukulahlekiswa wethu okulindelweyo emva kwentlanganiso. Ngelishwa, kunye onesiphumo unxibelelwano ezinye traits ye-interlocutor kusenokuba nzima kakhulu ukuba discern. Kwaye apha kuza inevitable disappointment kwi-transition ukuphila unxibelelwano. Kwi onesiphumo ngokwembalelwano, umntu unako kuba zilungile, kodwa everyday ubomi, akavumelekanga ukuba abe yakho uhlobo mntu kwaphela. Addiction ukuba onesiphumo unxibelelwano. Abantu abaninzi baba isolated kwi-Intanethi kwaye ngokulula yima unxibelelwano kuphila. Kwi-Intanethi unje a spider ukuba lures kwi yayo net. Abantu baba addicted ukuba unxibelelwano loluntu kwi-networks. Kwaye lo eyona imbi loo nto. Ngoko ke, babuyela zethu umbuzo: ingaba Internet acquaintances ngenene umsebenzi. Ngokuqinisekileyo, into abayenzayo. Kubalulekile kuphela ebalulekileyo oluzenzekelayo toxic kwaye non-ngobuchule partners, kwaye yonke into izawuba zonke ekunene. Kukho amakhulu kwaye amakhulu narratives malunga abantu abathe zifunyenweyo zabo ngcono isiqingatha kwi-Intanethi. Baya incoko, get ukwazi ngamnye enye, zithungelana, isigqibo, sicwangciso. Layo s njenge beautiful Internet ndijonge phambili ibali. Kodwa lo mba xa ufuna unikezelo eli-intanethi-romance kwi into ezininzi ezinzima. Umhlobo wam zifunyenweyo a kubekho inkqubela kwindawo enye kwi-intanethi-incoko umdlalo. Kamsinya kokuba kuqaliswe dating kwi kakhulu umdla indlela kwaba-Skype dating. Emva phantse unyaka ka-mutual uvakalelo the guy kugqitywe ukuba iphaphazela kuye kweli lizwe ukuze badibane okokuqala. Kwaba a true disappointment kuba umntu abo wachitha ngoko ke kakhulu imali nomzamo xa kubekho inkqubela wahlangana asivunywanga kuye njengoko waba rude ukuba abahlobo bakhe kwaye hayi yakhe uhlobo nakanjani na. Ndiyaqonda yakhe jikeleziso waba hayi happiest. (Ukusuka okungaziwayo visitor) ndine zahlangana umyeni wam on Christian site. Wayeyindoda eliphakathi-iphelelwe umntu, kakhulu handsome kwaye uhlobo, wayethetha ukuba intliziyo yam Emva zimbalwa zidlulileyo, lowo ezicetywayo ukusa ku-Utah naye. Andinako kukholelwa ukuba enjalo abantu basenokuba kwi-Intanethi. Ikhangeleka ngathi yayiyeyona destiny. (Ukusuka zingeniswe umsebenzisi) Emva ukufunda abo amabini ngokupheleleyo ezahlukeneyo stories uyakwazi ukuqonda ukuba i-sikazwelonke kusenokuba lotshintsho ezahluka-hlukileyo. Ingaba ufuna ukuqhubeka a budlelwane ukuba ufuna transition ukusuka kwi-intanethi – real-ubomi isimo? Ukuba impendulo ngu, siza yiya kwi elandelayo isihloko. Xa ungakwazi kuhlangana girls kwi-intanethi. Impendulo ngu ngaphezu elula. Kukho malunga nama-a gazillion zephondo ukuba ingaba kwaphuhliswa ukunceda wena fumana engcono nesiqingatha. Abo bamele: dating zephondo, kwi-intanethi-iqela iincoko kuba abantu abaphila efanayo umdla, kwaye, kunjalo, intlalo-media, kuquka Tinder, Facebook, njalo njalo. Unga khangela ngaphandle reviews nanini lokugqiba into ofuna intonga. Xa kufuneka kufuneka ahlangane abafazi kwi-intanethi? Wonke-intanethi intlanganiso kufuneka kufanelekileyo, ngoko ke, khumbula ukuba kunjalo uyakwazi mhlawumbi belong ezimbini ezahlukeneyo hemispheres kwaye facetiming abantu ebusuku ayikho kakhulu glplanet. Endaweni yoko, buza kuba ixesha imini xa yayo s convenient ukubiza okanye umbhalo. Yena babekho kwintlanganiso xa ufuna bombard a amahlwempu kubekho inkqubela kunye izaziso.) Ingaba inkangeleko yakho ukuzaliswa ebalulekileyo ulwazi. Ukuba yakho iphepha iqulathe kuphela yakho kuqala kwaye yokugqibela igama okanye kukho nto ngaphezu a nickname phaya, ngoko ke akukho mcimbi njani nzima uzama babambisa i kubekho inkqubela kunye imiyalezo yakho, yena ngu engathndwayo ukuphendula kuwe. Ngenxa yokuba zonke kuyafana na iibhonasi ii-acecard symbol okanye abanye abahlobo bakhe abo kugqitywe ukudlala trick ngomhla wakhe. Yiloo nto kufuneka uzalise inkangeleko yakho ngokucacileyo kwaye ngokuchanekileyo, ngoko ke, ukuba zonke ezi unnecessary mibuzo iza utyibiliko. Kubalulekile ngokwaneleyo ukubhala ambalwa amanqaku: isixeko, ubudala, yakho yokwenene kuqala kwaye igama lokugqibela, layisha phezulu okulungileyo iifoto. Oku kufuneka ubuncinane ngokulula kufuneka kwindlela yakho iphepha. Inkangeleko yakho nguwe (yakho onesiphumo mna-umfanekiso) kwi-Intanethi.
Ngoko ke, ukuhlamba kobuso benu phambi ebonisa ngayo Ehlabathini.) Into yokuqala na ukuba kubekho inkqubela uza isaziso ingaba inkangeleko yakho. Ukuba ufuna layisha phezulu oludala photo, ngoko blame ngokwakho. Akukho mntu uya impendulo kuwe. Iifoto, kufuneka entsha kwaye kufuneka mgangathweni. Khetha umfanekiso, apho ufaka kwezinye elihle indawo okanye olandelayo ukuba kukho into enikisa umdla, ngoko ke kusenokuba ngumsebenzi incoko-pruhun. Layisha phezulu abanye iifoto kunye abahlobo bakho (decent iifoto, hayi ezinye club debauchery). Kuya kuba kulungile ukuba abahlobo bakho jonga abafanelekileyo kwaye presentable, hayi kwezemidlalo suits kunye utywala. Enye ebalulekileyo incopho – tshintsha uhlaziye yakho iifoto, bonisa ukuba uhlala khona i-exciting ubomi, ukhenketho, yiya elihle iindawo. Inzala ka – kubekho inkqubela liza kunyuka, kwaye yena uya ufuna ukuqhubeka unxibelelwano. Yakho yomtshato ingaba yakho ukuzonwabisa.) Tsibela nomcimbi wecawe kwaye politics. Ubukhe seriously worry kuba ezopolitiko imeko kweli lizwe okanye ungummi super atheist, wena musa kufuneka ngeposi malunga oku ukuze hayi kubonakala a fanatic. A kubekho inkqubela nje babe bacinga ukuba ufuna kwakhona omnye andwebileyo umntu, apho isebenzisa loluntu networks na mouthpiece kuba izimvo zakho. Ukuhlala kude into efana nale, ngenxa yakho engundoqo imbono ukuba ahlangane girls i-intanethi, kwaye ingabi ukuxoxa ezopolitiko iimboniselo.) Yakho kudla kakhulu ebalulekileyo. Zama ukuba bazalise kwi-candelo malunga ngokwakho kangangoko kunokwenzeka, uphephe stamps kwaye musa ukubhala iibhonasi izinto ngathi elinolwazi guitar-umdlali xa jikelele awunokwazi nkqu ukudlala ingoma. Ukubhala malunga oyithandayo iincwadi, iimifanekiso – makube ngaphezu a standard misela lomsebenzisi, zama ukuma ngaphandle kwaye nako ukuhlangabezana abantu kwi-intanethi. Yongeza ezimbalwa provocative luphindo kwaye voilaquery – ubuncinane, yena uya kuba komhlaba malunga yintoni s yakho intloko kwaye loluphi uhlobo guy ubhala, ngolohlobo. Kwaye oku kuthetha ukuba ngaba kwenzeka imbono yakho. Ukuba isixa phezulu ndifuna ukuba unqwenela ukuba nibe nobulumko kwaye uqinisekile, inyaniso kwaye banobuhlobo. Abantu rhoqo kuwa kuba honesty, hayi iibhonasi izincomo okanye chola-phezulu imigca. Kuba idayimani kwi-cheap pile ka-garbage ngokuba loluntu media, khetha umlingane wakho ngobulumko kwaye ngokubanzi kuba ndonwabe. Abafazi-intanethi ingaba ulinde prince njenge nani
← Izinto Silindele Xa Dating a Isitshayina Umfazi Ngokwenene Isitshayina Hetalia
Phezulu amazwe kuba omnye Asian guys ukuhlangabezana zinokuphathwa girls →